फलामे फोक्सोले बाँचिरहेका संसारका एकमात्र व्यक्ति - टि. एल. एन पोस्ट
Home Uncategorized फलामे फोक्सोले बाँचिरहेका संसारका एकमात्र व्यक्ति
संसारमा कैयन् यस्ता मानिसहरु हुन्छन् जो कठीन चुनौतिहरुसँग संघर्ष गरेर असम्भव कामलाई पनि सम्भव तुल्याइदिन्छन् ।
अमेरिकी लेखक पाउल अलेक्जेन्डर त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो ६० वर्षदेखि फलामको फोक्सोले स्वास फेरिरहेका छन् । ६० वर्षदेखि उनी त्यहीँ मेसिनभित्रै बस्दै आएका छन् ।
पोलियोका कारण फोक्सो बिग्रिएसँगै उनी ६ वर्षदेखि नै फलामे फोक्सोको भरमा बाँचिरहेका छन् । मेसिनभित्र बन्द हुन्छन् । मेसिनभित्रै सुतेर उनले विश्वविद्यालय स्तरको पढाई गरे र आफ्नो आत्मकथा लगायतका किताब पनि लेखे ।
उनी राम्रोसँग चल्न पनि सक्दैनन् । किबोर्डमा प्लास्टिकको स्टिक चलाएर उनले किताब लेखेका हुन् ।६ वर्पाको उमेरमा पोलियोको सिकार भएका पाउलको उमेर अहिले ७५ वर्ष भैसकेको छ । पोलियोका कारण बच्चैदेखि उनले निकै पीडा भोग्नुपर्‍यो ।
एकदिन साथीहरुसँग खेलिरहेको बेलामा लडेर उनको सरीरमा चोट लागेपछि त समस्या विकराल भयो । उनी हिँडडुल गर्न तथा खानपिन गर्न समेत नसक्ने भए । पोलियोका कारण उनको फोक्सोमा ठूलो क्षति पुगेको डाक्टरहरुले पत्ता लगाए ।
त्यसपछि उनलाई जिवित राख्नका लागि एकमात्र उपचार थियो फलामे फोक्सो अर्थात् आइरन लंग्समा राखेर स्वास दिनु । त्यस समय कम उमेरका पक्षघातका विरामीहरुले वयस्क नहुन्जेलसम्म फलामे फोक्सोको सहयोगमा स्वास लिनु पर्ने थियो । तर वयस्क हुँदासम्म पनि पाउलको अवस्थामा सुधार आएन । जसका कारण डाक्टरहरुले उनलाई सधैभरी फलामे फोक्सोको मेसिनमै राख्ने निर्णय गरे ।
यति कठीन जिन्दगीले पनि पाउलको हौसला डगमगाएन । उनले मेसिनमा बन्द भएरै पढाई पूरा गरे । कानूनको पढाई पूरा गरेसँगै उनले केही समय विशेष ह्विलचेयरको सहयोगमा वकलात पनि गरे । पछि उनले आफ्नै आत्मकथा लेखे । किताब लेख्नु सजिलो काम थिएन । त्यसैले त्यो किताब पूरा गर्न उनलाई ८ वर्ष लागेको थियो ।
यसअघि पाउलले जस्तै फलामे फोक्सोको प्रयोग गरेका मासिनहरुको संख्या धेरै छ । तर हालका लागि पाउल संसारका एकमात्र जिवित व्यक्ति हुन् जसले अहिले फलामे फोक्सो प्रयोग गरिरहेका छन् ।
Previous articleयो हो संसारकै ठूलो मकैको घोँगा फल्ने ठाउँ
म्युजिक भिडियोमा साम्राज्ञीको पारिश्रमिक कति ?
पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण चलचित्र क्षेत्र ठप्प छ। नयाँ चलचित्र छायांकनको त परको कुरा निर्माण भैसकेका चलचित्र पनि रिलिज हुन् सकेका छैनन। तर...
छोरालाई कलेजको गाडी चढाउन सडकमा निस्केकी आमा र छोरा दुवैलाई ट्रकले ठ’क्क’र दिँ’दा दुवैजनाको मृत्यु भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा...
आजकल मानिसहरु जुत्ता चप्पलविना त एक पाइला पनि हिड्न गाह्रो छ । यद्यपि गाउँघरतिरका कतिपय बुढापाका मानिसहरु भने जुत्ता चप्पल नलगाइकनै हिँडडुल गर्ने तथा...
दुर्गेशसँग टिकटक लाइभमा आउँदा गल्ती भएकै होः गरिमा शर्मा
पछिल्लो केहि समय टिकटकबाट उदाएका मोडलहरुले म्युजिक भिडियोमा राज गरिरहेका छन्। महंगा नायक नायिकाहरुलाई लिन भन्दा टिकटकबाट उदाएका कलाकारहरुलाई लिदा सस्तो पारिश्रमिक, राम्रो प्रमोसनका...
अमृता नेपालको “मलाई सम्झिनु” बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक( भिडियो सहित)